Maalinta: Febraayo 3, 2019
TÜDEMSAŞ Promises Hope Out Waa Inuu Ilaaliyo Hay'adda
Shirkadda TÜDEMSAŞ waxay awood u leedahay inay qabato shaqooyinka shirkadda Shiinaha ee la siiyay qandaraaska 'metro ጨረge'. Hou Bo, Liu Huanjun iyo Yang Lie oo ka socda CRRC kana yimid Shiinaha iyo Liu Hao oo ka socda Zeer ayaa booqday TUDEMSAS. Maareeyaha guud ee TÜDEMSAŞ [More ...]
dheer km Uskudar Cekmekoy Line 20, waa khadka metro labaad dhinaca Asian ee Turkey ayaa waxaa line metro driverless ugu horeysay. Khadku wuxuu ka bilaabmayaa Usküdar Square, wuxuu dhex maraa bartamaha degmada Umraniye waxaana uu ku dhammaadaa wareegga jimicsiga. [More ...]
Metro İstanbul A.Ş waxay qaadday ficil lagu dhisayo masjidka lab iyo dhadig, qolka maylka, daryeelka ilmaha iyo qolka nasashada ee shaqaalaha saldhigyada metro. Metro Istanbul A.Ş si loo kordhiyo qanacsanaanta rakaabka ee saldhigyada ragga iyo dumarka masjid, guriga qulqulka, ilmaha [More ...]
Agaasimaha Guud ee Agaasimaha Guud ee Dawlada Turkiga (TCDD) ee Afyonkarahisar, Kutahya, Eskisehir, Istanbul iyo İzmir İsa Apaydın iyo wefdiga wehelinaya ee Dinar, joogsi tareen xawaare sare leh iyo laba [More ...]
ÇerkezköyIn kasta oo xaqiiqda ah in xannibaadkii la xiray, tareenka tareenka ee tareenka ku socday gaadhiga ka gudbayay heerarka isgoyska ayaa la garaacay. Shilkan, dareenka makaaniga ah sababtoo ah shilka ayaan dhaawacmin. Wadnaha xarunta Çerkezköy gobolka [More ...]
Diyaarad Giant Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
Diyaaradda Turkish Airlines ayaa kasoo duulineysa garoonka diyaaradaha Ataturk kuna sii jeedo garoonka diyaaradaha ee Istanbul. IYAD, qaybo ka mid ah qalabka, alaabada iyo mashiinnada shalay, kolonyo 35 TIR ah ayaa la diray. Tallaabada weyn waxay ku dhamaan doontaa 3 Maarso. Cirka Turkiga [More ...]